विद्यार्थीलाई नपिटी पढाए पो ! — Himali Sanchar
विद्यार्थीलाई नपिटी पढाए पो !
काठमाडौँ — विद्यार्थीको आनीबानी सुधार्न सामान्य सजाय दिएको’ भन्दै शिक्षिका पुन पन्छिन खोजे पनि विद्यार्थीको हात भाँचिएर प्लास्टरसम्म गर्नुपरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । गृहकार्य नबुझाउँदा वा गल्ती गर्दा, समयमै विद्यालय नपुग्दा, विद्यालयको कुनै नियम अवज्ञा गर्दा र आपसमा झगडा गर्दा विद्यार्थीहरू शिक्षक–शिक्षिकाको निसानामा पर्ने गरेकाछन् । सिकाइकै क्रममा विद्यार्थी पिटिने घटना बाहिर आएभन्दा नआएका अनगिन्ती छन् ।
शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले शिक्षकहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको दसमहिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई दिइने यातनाविरुद्धपाठ्यांशहरू समावेश छन् । उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले भाग लिए पनि निजीका शिक्षकहरूको सहभागिताभएको पाइँदैन ।
सामसुङलाई हुवावेले पछि पार्दै बनायो नयाँ रेकर्ड
नेपालकै पहिलो मौसमी राडार बिग्रियो
सामसुङले ल्यायो गुणस्तरीय फोटो खिच्ने प्रविधि ‘ISOCELL GN1’
भूकम्पले काठमाडौं उपत्यका हल्लाएपछी…